I-Apple inyanzelisa iVenkile yeVenkile kwakhona, ngoku umdlalo wevidiyo | IPhone iindaba
Impikiswano ixhomekeke kwinkqubo yengcinezelo ngokuchasene neziyobisi ezinyanzeliswa ngurhulumente wasePhilippines. Nangona ukuphela kubonakala kufanelekile, iindlela zikude nembeko yamaLungelo oluNtu ekucingelwa ukuba phantse kulo naliphi na ilizwe eliphucukileyo. Kwaye kuba iApple ayiphosi mpikiswano, ayinakuphinda nayo le.
Eli libali lokuba emva kweleta evela kumbutho ongenzi nzuzo u-Apple uvumile ukususa umdlalo wevidiyo kwiVenkile ye App. Kucacile ukuba umgaqo-nkqubo we-iOS app awunangqondo ukuyithetha, kuba bahlala besinika iindaba malunga nokuqhekeka okunzima kunye nenkqubo engqongqo yemithetho ebeka i-Apple kubaphuhlisi.
Kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS, izicelo ezininzi zikhutshiwe ezizukisa imo kuMongameli wasePhilippines, uRodrigo Duterte, ligqibe kwelokuba liziphelise iziyobisi kwizitrato zeedolophu zazo. Ngokusebenzisa imiceli mngeni kunye nezibizo, le midlalo yevidiyo ikhuthaze ukuphakanyiswa komlinganiswa ohlonitshwayo, uMongameli obandakanyeka kwithambeka elibalulekileyo lempikiswano ngenxa yemithetho yakhe engqongqo ebeka esichengeni ubuncinci. Kwaye iApple nayo "yalatha kwibhombu", kuba ukushenxisa ezi zicelo ziyimidlalo yevidiyo yokwenyani (akusekho sodiyam kunabanye esele ikhona) kwaye abayi kutshintsha indlela yokucinga yabantu.
Malunga ne-7.000 ekrokrelwa ukuba inxibelelana neziyobisi sele ibulewe kwiiPhilippines ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, inani eliyintlekele, kodwa loo nto ayinanto yakwenza “nokuLwa uLwaphulo-mthetho 2”, umdlalo ozama ukuhlekisa ngeendlela uDuterte azisebenzisayo ukusombulula le ngxaki. Nokuba yeyiphi na, iVenkile yeApp ye-iOS inezopolitiko, ngelixa izicelo ezinje nge "Indawo yeWhatsApp" ezicace gca ukuba ziqhubeka nokwenza imali ngokusebenzisa abo bangalindelanga abahamba ngeVenkile yeApple. Kubonakala ngathi ezo zinto azixakekanga kangako kwiCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple inyanzelisa iVenkile ye App kwakhona, ngoku ngumdlalo wevidiyo
I-Apple isungula ukuFunda kwentliziyo, usetyenziso lokulawula isifo sentliziyo